ဆဲလ်တစ်အမှုဆောင်ချုပ်ရဲ့နေအိမ်တွင် ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား – Play Maker Sports Journal
ဆဲလ်တစ်အမှုဆောင်ချုပ်ရဲ့နေအိမ်တွင် ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
May 20, 2021 playmaker Sports News 0
To go with story by Alasdair Clark. Celtic chief Peter Lawwell's home hit by 'petrol bomb attack' Picture shows; Fire damage at Peter Lawwell's home. Inset: Peter Lawwell. Thortonhall, Lanarkshire. Supplied by DCT Media Date; 19/05/2021
လောဝဲလ်ဟာဆဲလ်တစ်အသင်းတွင်အမှုဆောင်ချုပ်အဖြစ်၁၇နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးယခုရာသီအကုန်တွင်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပါမယ်။သူ့နေရာမှာစကော့တလန်ရက်ဘီအဖွဲ့ချုပ်မှ COO ဒိုမီနစ်မက်ကေးကတာဝန်လွဲပြောင်းထမ်းဆောင်သွားပါမယ်။
ဆဲလ္တစ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ရဲ႕ေနအိမ္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ၊ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား
ေလာဝဲလ္ဟာဆဲလ္တစ္အသင္းတြင္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္အျဖစ္၁၇ႏွစ္ၾကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သူျဖစ္ၿပီးယခုရာသီအကုန္တြင္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ပါမယ္။သူ႔ေနရာမွာစေကာ့တလန္ရက္ဘီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ COO ဒိုမီနစ္မက္ေကးကတာဝန္လြဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္သြားပါမယ္။
အရက်သောက်ကာ ကားမောင်းမှုကြောင့် ဘန်လေစတားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရ
ပြင်သစ်ရဲ့အခွန်စနစ်ကြောင့် ရီးရဲလ်သို့ ပြောင်းဖို့ နီးစပ်လာတဲ့ အမ်ဘက်ပီ